abafana Soviet wayethanda ukudlala izimoto. Manje etshalwa, futhi abanothando amathoyizi usekhona. Isipho engcono indoda zanoma iyiphi iminyaka - izimoto collectible, wenza, isibonelo, esikalini esisuka ku-1 kuya ku 43. Lokhu kuzokwenza nesimo samanje indodana noyise, isoka ethandekayo noma umyeni, abalingani kanye abaziphethe. Futhi asikho isidingo ukubheka zazihlangene esenzakalweni esikhethekile, ukuze afeze isifiso osekunesikhathi eside unayo noma ukuze nje enze isimanga. Usuku lokuzalwa oluhle, Unyaka omusha, iholidi professional, nje lapho ngifuna ukwenza okuthile okuhle.
Uma uqiniseka ukuthi umngane wakho - ngalendoda, hit ngqo akunakwenzeka! Okungcono kakhulu, uma wazi ukuthi hlobo luni imoto ethanda, futhi yisiphi model okwamanje. Mhlawumbe kungcono izimoto collectible USSR noma, kunalokho, angaphandle ezenziwe? Zama ufunde kabanzi mayelana intshiseko yakhe, cishe wayengacabangi kangako ujabule sikhangise ziphephile zayo futhi utshela konke okudingayo. Into esemqoka iwukubonisa ukuthi lesi sihloko Kuyathakazelisa ngempela kuwe.
Kwenzeka ukuthi imishini yokubhala imodeli iqoqo ekhiqizwa eziningi limited. Ziyakwazi enzima noma cishe akunakwenzeka ukuthola isendalini. Uma ufuna ukulandelela phansi ikhophi kwegazi encane, kubalulekile ukuthola amasayithi anikezelwe izimoto lokuqoqa, futhi ukushicilela isimemezelo ekutholeni imodeli kwesokudla. Mhlawumbe kukhona abantu ongakusiza. Bese kuba khona ithuba ukufeza iphupho ezithandwayo zezingoma ojwayelene nabo abafuna ukwenza isimanga. Lesi sipho liqinisekile akuqonda ngemva kwesikhathi.
Uzibheka lucky uma uthanda izimoto collectible landile. Ungaya esitolo noma ukucinga izitolo inthanethi. Omkhulu ukulinika imodeli kuzo zonke izimoto eyayisetshenziswa hero usuku, kungakuhle kakhulu - ngemibala efanayo. Okunjalo ukumangala show ukunakekela umuntu, njengoba benesithakazelo kangaka ekuphileni kwakhe, futhi efika epaki imoto ngeke waft izinkumbulo ezimnandi.
Impela ukujabulisa izimoto collectible kwalowo oyisibonelo, efuna ukuyibuyisa ngokuyithenga futhi umngane wakho. Kuyoba samuntu ngempela kwephupho lakhe, into izifiso ngeso, isinyathelo sokuqala kule moto. Abesilisa bayathanda ukubukisa izimoto zabo, yangempela futhi labo ephethwe ngaphambili. Isipho sakho kuyoba umfanekiso ephelele leyo ngxoxo. Eme phambi kwaleso ezemidlalo ibhala model yakamuva, ngisho encane, akekho ongamelana. Zonke amathoyizi ungajabulisa engxenyeni abesilisa ehhovisi ngoFebhuwari 23. Kunzima ukucabanga isipho neliphelele ngokwengeziwe futhi original.
Ngokuvamile, lapho abantu bethi "izimoto collectible", sikhuluma ngokuyinhloko mayelana nezimoto. Nokho, ukwehluka imikhiqizo ahlinzekwa okuningi. Ezitolo ungathola ezimotweni, amaloli, izimoto ezemidlalo, nezempi. Amamodeli ncamashi ukukhiqiza kabusha imoto yangempela, phansi ngisho nasemininingwaneni emincane kakhulu. Lokhu iyona eyenza eziqoqekayo kusukela amathoyizi evamile.
Yenza isipho indoda yakho, kungaba esikhulu noma esincane. Basuke ngokulinganayo bajabule Collection izimoto. Mhlawumbe lokhu imodeli Siyoba yini isibonakaliso lokuqala iqoqo elisha.
Izinhlamvu zemali zonyaka siyigugu abaqoqi namuhla
Isitofu nge ibhodi kuhhavini: yini ukukhetha? Qhathanisa onobuhle engcono kanye nokubuyekeza
Cetyl utshwala: incazelo kanye isicelo